Uhlu Lwama-Anime angama-Psychological angama-30 ODINGA UKUCABANGA - Okunye
Uhlu Lwama-Anime angama-Psychological angama-30 ODINGA UKUCABANGA
Akukho okufana nokubuka i-anime enhle yezengqondo.
I-anime yezengqondo ivame ukuhlola i-psyche yomuntu, ukumba ekuboneni okuvamile nokucabanga okucabangayo, konke ngenkathi inikeza i ukuthakazelisa indaba.
Izici eziphawulekayo zezinganekwane zengqondo yilezi:
(Izingxabano) Zangaphakathi / Zokuxhumana.
Ukuxoxwa kwezindaba okuqhutshwa ngumlingiswa.
Ukuhlolisiswa kwezisusa zomlingiswa.
Ukusakazwa kokwazi nokwazi kwangaphakathi.
MyAnimeList kuyichaza ngemidlalo yengqondo phakathi kwabalingiswa, abathi injalo 'Lapho abalingiswa ababili noma ngaphezulu bephanga izingqondo zabanye, kungaba ngokudlala imidlalo ekhohlisayo ngomunye noma ngokuzama ukudiliza isimo sengqondo somunye.'
Ungabheka futhi nencazelo ye-Google yezengqondo ethi 'ye, ethinta, noma evela engqondweni; kuhlobene nesimo somuntu ngokwengqondo nangokomzwelo ” futhi siyisebenzise endleleni esibuka ngayo uhlobo lwe-anime.
Yize kungaba uhlobo olubanzi, lezi zinhlobo zemibukiso zonke zivusa ingqondo ngendlela yazo.
I-Anime ehlukaniswe njengengokwengqondo ngijwayele ukuba yizintandokazi zami, futhi ngihlanganise uhlu lwe-anime engikholwa ukuthi kufanelekile ukuwabelana ngalo!
1. Inothi Lokufa
Ingqikithi yeziqephu: 37.
Mhlawumbe i-anime yezengqondo ethandwa kakhulu sonke isikhathi, Incwadi yokufa Akudingeki isingeniso.
Le ndaba ilandela umfundi ohlakaniphe kakhulu esikoleni esiphakeme uLight Yagami, othola incwadi yokubhalela engaqondakali ebizwa nge- “Death Note”. Iyakwazi ukubulala noma ngubani umsebenzisi afisa ngaye ukubhala igama labo kuyo.
Umbukiso ukunika okuningi ongakucabanga:
Sichaza kanjani isimilo esifanele?
I-anime yezengqondo ivame ukucabanga ngale ndlela.
Incwadi yokufa ayinamahloni ngezindikimba zayo, kepha lapho kukhanya khona impela yimidlalo ebamba ngokumangazayo, enamandla kakhulu phakathi kukaLight, no-L, nomphenyi owaziwayo onikwe umsebenzi wokuthola ukuthi ungubani uLight.
Lezi zingqondo ezimbili eziphakeme khipha okuhle komunye nomunye, futhi kunjalo ngempela umbukwane ongawubona.
Okuhlobene: Ama-30 Wokucabanga Okucasulayo Okucaphuna Kusuka Ekufeni
Ingqikithi yeziqephu: 74.
UNaoki Urasawa ’s Isilo uyisasasa elinamandla ngokwengqondo elandela uDkt. Kenzo Tenma, osindisa impilo yomfana ongenacala ogama lakhe linguJohan phezu kweMeya esegugile (umphathi wakhe akhetha ukuyisindisa).
Ukwenza lokhu ngoba umfana ubekhona kuqala.
Kusukela ngalowo mzuzu, impilo kaDkt Tenma iyehla futhi yenza izinto zibe zimbi kakhulu, ingane impilo yakhe ayisindisa ikhula ibe ngumbulali obulalayo.
UDkt Tenma uzizwa enesibopho esikhulu ezimpilweni zalabo abathathwa nguJohan, egqugquzela uTenma ukuthola futhi bulala UJohan.
Le ndaba isuselwe empeleni, ikwenza kube ukukhala okude kakhulu kwamanye ama-anime amaningi.
Ngaphandle kwezinganekwane, kuba ukwesaba okubandayo kwengqondo mayelana nesimo somuntu.
Kunezinhlamvu eziningi, zonke zizizwa zingokoqobo futhi zonke zinengxenye ebalulekile engayidlala. Ngenkathi kungukushisa okuhamba kancane, wonke umzuzu uyahlangana wakhe ifayili le- umsebenzi wobuciko ekugcineni.
Okuhlobene: Izingcaphuno ze-Anime ezicabanga kakhulu ezivela ku 'Monster'
3. Ikhodi Geass
Ingqikithi yeziqephu: 50.
Igcwele amasu amahle namasu empi, Ikhodi Geass iwashi eliphoqayo impela.
ILelouch vi Britannia izuza amandla abizwa nge- 'Geass' amvumela ukuthi enze noma ngubani akwenze noma yini , ngokuxhumana ngqo kwamehlo.
Usebenzisa la mandla ukuqala ukuhlubuka embusweni waseBrithani ukudala i Ngaphansi umhlaba okhohlakele.
ILelouch ibhekene nezinqumo eziningi ezinzima eziwombeni ezingama-50 ze Ikhodi Geass. Eziningi zazo zimbeka esimeni lapho kufanele anqume khona ukuthi yini eza kuqala kunenhloso yakhe yezwe elingcono lapho uMbuso WaseBrithani uwa khona.
I-psychology evusa amadlingozi yalolu chungechunge ihambisana nesenzo sekhwalithi ephezulu yemifanekiso nokugqwayiza okukhanyayo.
Ingqikithi yeziqephu: 26.
UNeon Genesis Evangelion ingenye yemibukiso enamandla kakhulu emlandweni we-anime. Okufanele ukubonwe ngokuphelele kunoma ngubani ozithandayo fan ye-anime.
Kulandela uShinji Ikari, onikwe umsebenzi wokuhlola i-mecha ebizwa nge- 'Evangelion', ukuvikela umhlaba ezintweni ezingaziwa ezibhubhisayo ezibizwa nge- 'Angels'.
USinji nabanye abashayeli bezindiza bakwa-Eva banesabelo sabo esifanele izingqinamba ezingokwengqondo ezibopha ubuntu bazo nokuthi kungani zivikela uMhlaba.
Umbukiso usebenzisa abashayeli bezindiza nabanye abalingiswa ukuhlola izingqinamba ezingokwengqondo ezikhungethe thina sonke, ngendlela ebibheda futhi isungula izinto ezintsha.
Okuhlobene: Ama-Anime ama-9 Wezempi Ukuthola Ukuthi Ungabanjwa Ngohlobo
5. Idayari Yesikhathi Esizayo
Abantu abangu-12 bakhethwa unkulunkulu wesikhala nesikhathi sokudlala umdlalo wokusinda lapho owinile ethola ukumfaka esikhundleni sakhe.
Umuntu ngamunye uneselula (noma “idayari”) ebikezela ikusasa ngezindlela ezahlukahlukene, ezenzelwe ubuntu bomlingiswa ngamunye.
Basebenzisa amadayari abo ukubulalana.
U-Amano Yukiteru ngu-protagonist wethu obonakala engu- okungenani uhlanya idayari umsebenzisi… Ikakhulukazi kuqhathaniswa Yuno Gasai, i-psychopathic Yandere othanda vikela UYuki ngempilo yakhe.
Lolu chungechunge luyisiyaluyalu esixakile.
Wonke umuntu onedayari unesimo esihlukile esenza izindlela eziningi ezahlukahlukene zokuhlaselwa. Lokhu kugcina isakhiwo sisha futhi akukaze kwehluleke ukumangala ngenkathi sikugcina onqenqemeni lwesihlalo sakho.
6. IParasyte: IMaxim
I-Parasyte: IMaxim igxile kuShinichi Izumi, umfundi wasesikoleni samabanga aphakeme ohlaselwa isidalwa esingaziwa esingaziwa okuthiwa yi- I-Parasyte .
Lezi yizidalwa ezinjengesibungu ezingena emzimbeni womuntu futhi zithathe ubuchopho babantu bazo. Benza njengabantu ukuze babone umphakathi, kepha badla inyama yomuntu engalindelekile lapho bekwazi.
UShinichi umisa iParasyte ngaphambi kokufika ebuchosheni bakhe, okumenza akwazi ukusebenzisa amandla eParasyte yakhe futhi aphile eduze nayo.
Ndawonye balwa nezimuncagazi ezicashe phakathi komphakathi.
Uchungechunge luhlola isimo somuntu nendima edlalwa ngabantu emphakathini. Kuphakamisa umbuzo wokuthi ezinye izidalwa zingenziwa yini ubuntu, futhi kuvuse ukuzwelana nezinye izakhamizi zomhlaba.
Kuyafaneleka: Iqoqo Lamacaphuno Anamandla Kusuka kuParasyte: The Maxim!
7. Ukwesaba Kokuvezwa Kwezwi
Amaphekula ahlasele iTokyo futhi acekela phansi idolobha. Lezi amaphekula kukhona Isishiyagalolunye neshumi nambili , futhi bangabaphikisi bethu.
Bafuna ukuvusa umhlaba, futhi basebenzise ubuphekula, nemiyalezo efihlekile abayishiya ngemuva njengendlela yokwenza lokho. Basabisa amaphoyisa ngokubhujiswa okubanzi kweTokyo, okubeka abaseshi emncintiswaneni wokulwa nesikhathi.
Kusukela esiqeshini 1 kuya kusiqephu 11 angikwazanga ukuvala lo mbukiso.
Lesi sikhangiso sobugebengu obungokwengqondo siyindaba ephathelene nomoya wokuhlubuka wentsha, futhi sinemibono eminingi yezenhlalo nezombusazwe ngokuzihlukanisa, nobucayi bomphakathi wanamuhla, nokuthi yini kuchaza ubugebengu.
8. Okuluhlaza okwesibhakabhaka okuPhelele
Iziqephu: 1 Movie.
Okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphelele kulandela isithombe se-pop UMima Kirigoe , njengoba eshiya iqembu lakhe le-J-pop ngethemba lokuba ngumlingisi wesikhathi esikhulu.
Lokhu kuyabacasula abanye babalandeli bakhe, kufaka phakathi i- kushubile stalker. Ukushintshwa kusuka kusihlabani se-pop kuya kumlingisi kunezithiyo eziningi kunalokho akulindele, ezinye zazo ngokwengqondo.
Iqiniso nefantasy lihlangana ndawonye kuMima ekufakweni kwe-movie kuphela kulolu hlu, okwenza icebo ligobe ingqondo ngokweqile.
Ubungcweti bukaSatoshi Kon buhlola ukukhathazeka kwethu ngokubona, isiko lezithombe ze-pop, umphakathi wabathengi, nemiphumela yakho konke empilweni yomuntu yengqondo.
Le ndaba ivivinya ngempela ingqondo.
Kunconyiwe: Uchungechunge Olukhulu kakhulu lwe-18 + Anime Oluvuthiwe Kakhulu Lwezingane Ezincane
Indaba yenzeka emphakathini wobushiqela, lapho iSybil System inganquma izinga losongo noma yiluphi umuntu alubekayo.
Lokhu inhloso uhlelo luhlola isimo sabo sengqondo noma yiziphi izinhloso ezimbi abanazo, futhi imiphumela ibonakala njenge- 'Psycho Pass' yabo. Indaba iyalandela Akane Tsunemori njengoba eqala umsebenzi wakhe njengoMhloli weSybil System.
I-Psycho-Pass kuveza amaphutha ohlelo lwezobulungiswa 'olunenhloso ephelele'.
U-protagonist uyalwa ngokuphoqelela uhlelo olungabenzi kahle ubulungiswa ngokuphelele njengoba kukhangisiwe, futhi bonke abahloli bathwala ukuhlukumezeka kwabo ekubeni sebusosheni lwamaphoyisa.
10. Siyakwamukela eN.H.K
Lokhu kungena kuhluke kakhulu kunabanye ohlwini ngoba kungaphezulu kwe- ucezu lwengqondo lokuphila , kune-a ngokwengqondo i-thriller, horror, noma i-anime yomdlalo.
I-protagonist ngu Satou Tatsuhiro, umfundi oshiye phansi ekolishi ongasebenzi iminyaka engu-4.
Uzivalele ngaphakathi futhi usola yonke into ngaphandle kwakhe ngempilo yakhe. Uthola usizo lukaMisaki Nakahara, intombazane engaqondakali ethi iyakwazi ukumsiza Ima ukuba ngunkom 'idla yodwa.
Uyemukelwa ku-NHK ihlola i-psychology ngemuva kwendlela yokuphila evaliwe, ukucindezeleka, isiko le-otaku, nemicabango yokuzibulala.
Ngingancoma le anime kunoma ngubani owake wazizwa sengathi akayazi indawo yakhe emphakathini.
11. Ukufa Parade
Isisekelo salolu chungechunge silula. Noma nini lapho umuntu efa, bathunyelwa endaweni yokucasula engaqondakali lapho behlanganyela khona emidlalweni yokufa “nomphefumulo” wabo ulayini.
Bengazi kubahlanganyeli, abaphathi benkani abalamula le midlalo bayabahlulela ngokususelwa endleleni abaziphatha ngayo phakathi nomdlalo, futhi banqume ukuthi bakufanele yini ukuphindukuzalwa kabusha noma ukudingiselwa ekukhohlweni.
Ngayo yonke imidlalo, kwethulwa izimo ezihlukile zabantu, futhi yakhela ekuhloleni ngokwengqondo ukuthi abantu benza kanjani lapho befakwa ngaphansi kwengcindezi yezigxobo eziphakeme kangaka.
Abadayisi nabo banesabelo sabo esilinganayo sezinkinga, bezwa isisindo sokwenza izinqumo maqondana nokuphila kwangemva kwabanye.
12. Umzamo Wokuzama Ukulingwa
U-Lain Iwakura uthola i-imeyili engahluphi kumuntu ofunda naye owazibulala, futhi kusukela lapho kuya phambili uyadliwa yi Kunentambo. Inethiwekhi yezokuxhumana yomhlaba ebonakalisa i-inthanethi yomhlaba wangempela.
U-Lain ubambeka ochungechungeni lwemicimbi esukela emfihlakalweni iye e-surreal, futhi amenze aphenye izimfihlakalo ezingemuva Kunentambo.
Le anime ihlola izingqinamba zokuthi ubunikazi nokwazi kuthinteka kanjani ngokuthuthuka kobuchwepheshe.
I-intanethi ingaba yinto esabekayo lapho ucabanga ngengcebo yolwazi engenakwenzeka eliyiphethe, futhi Lain Ukuhlolwa Lain kuyisibonakaliso salokho.
13. Ummeli weParanoia
Kunokwesaba okuhlasele iDolobha laseMusashino kanti igama lakhe nguLil ’Slugger.
ILil ’Slugger igibela izungeze idolobha ngama-rollerblade, ilalisa abantu ngesiginesha yabo yegolide ye-baseball. Abaseshi uKeiichi Ikari noMitsuhiro Maniwa basebenzela ukuthola ukuthi ungubani futhi ukuthumba yena.
Njengoba igama lisho, Ummeli weParanoia usingatha isimo esithathelwanayo se-paranoia nokukhathazeka.
Ngokuhlaselwa ngakunye, ukwesaba kukaLil Slugger kuya ngokuya kukhula kakhulu, kanti ne-paranoia ifinyelela ku-fever pitch eveza ukuphawula kokuthi abantu benza kanjani ngaphansi okukhulu ukuphambana.
14. Awukho Umdlalo Awunampilo
USora noShiro bangababili bezingane zakini abanganqotshwa emidlalweni ehlukahlukene emhlabeni wokudlala online.
Ngemuva kokwehlula unkulunkulu wemidlalo emdlalweni we-chess online, bayiswa ezweni lapho izingxabano ezinkulu zixazululwa ngokudlala imidlalo.
USora noShiro bazimisele ukusebenzisa amakhono abo emidlalweni ukuhlanganisa leli “zwe lomdlalo” futhi ngenkani ube nguNkulunkulu wawo.
Ngayo yonke into ixazululwa ngokudlala imidlalo, akukho ukushoda kwezenzakalo ezithokozisayo necebo eliyingqayizivele elenzeka njalo kusiqephu.
Ukubona ukuthi laba bobabili baphuma kanjani phambili noma ngabe amakhadi afakwa kubo, kwenza le anime ibe iwashi elifanele.
Okuhlobene: Uhlu OLUKHETHA KAKHULU Lwegemu Azikho Izilinganiso Zokuphila Ezicabanga Ukuthi Zishukumisa
15. Ukugembula Apocalypse Kaiji
UKaiji Itou ukhohlisiwe ukuthi asayine ngesivumelwano semalimboleko yomunye wabasebenza naye, futhi kubukeka sengathi iyi- okweqile inani lesikweletu.
Unikezwe isivumelwano esingalungile sokubamba iqhaza ekugembuleni komhlaba ngomkhumbi wokulwela ukuzama ukubuyisa imali.
Akukho ukushoda kwemidlalo yengqondo phakathi kukaKaiji nabaphikisi bakhe.
Le anime ibuye iveze ubunjalo bokuthi abantu bangaba kanjani lapho kungena imvelo yokusinda, futhi akukho okusele okuzolahleka.
Lezi zinhlamvu konke kuningi okusengozini, ngakho-ke ukukopela, ukukhohlisa, nanoma yiziphi ezinye izindlela zokuwina nganoma iyiphi indlela edingekayo kuyabhekwa
Kuyafaneleka: I-37 Yezingcaphuno Ezimnyama Kakhulu Zama-Anime Ezokushaya Njengethani Lezitini .
16. Kakegurui - Compambive Gambler
IHyakkaou Private Academy Kubukeka sengathi kunanoma isiphi isikole esihlonishwayo esinezinga eliphakeme labafundi baso ngaphezulu, kepha siphinda kabili njenge- ukugembula umhume ebusuku.
Isikhundla sabaphathi bakulesi sikole sincike eminikelweni yabo yemali emkhandlwini wabafundi, ngakho-ke badlala imidlalo ehlukahlukene ngethemba lokuthi evuka izinhlu.
Iningi labafundi ligembula ngekusasa lalo engqondweni, kepha hhayi umlingisi wethu Yumeko Jabami. Ungaphakathi kulo injabulo.
Ngokufana neKaiji, iKakegurui inikela ngemidlalo yengqondo enamandla, esezingeni eliphezulu esiqeshini ngasinye. Ibonisa isimo semali esonakalayo, nokuthi inani lemali lingabakha kanjani isigaba sabaphathi.
17. Kusukela Ezweni Elisha
Setha izinkulungwane zeminyaka ngokuzayo, abantu abanengqondo bahlala emphakathini ongayedwa onemithetho eyinkimbinkimbi.
USaki Watanabe oneminyaka engu-12 osanda kuvusa amandla akhe, futhi uthola ukujoyina abangani bakhe abavuse namandla futhi.
Kodwa-ke, uqala ukuzibuza ukuthi kwenzakalani kulabo amandla abo angakaze avuke, futhi izingane ziqala ukugxambukela kulezi zindaba eziyimfihlo.
Kusuka Ezweni Elisha yindaba ezayo kaSaki nabangane bakhe njengoba bezama ukukhula babe izindima zabo zomhlaba onzima abahlala kuwo.
Njengoba bethola amaqiniso abukhali futhi amnyama ahambisana nalesi sizathu esithiwa sikhulu, ukungena okuningi kudlala indima ekutheni bafuna ukwamukela izindima zabo emphakathini onjalo noma cha.
18. Umoya kuShell: I-Standalone Complex
Isintu sesithuthuke safika ezingeni lapho ukufakelwa komzimba kusuka enyameni kuya emshinini kungenzeka.
Ngokwemvelo lokhu kubangela ukwanda okukhulu kokuqina komzimba kanye ne-cybernetic. Kodwa-ke, izigebengu zikwazi ukufinyelela ubuchwepheshe obufanayo, okuholela endaweni eyingozi kakhulu yobugebengu.
Isigaba 9 sisungulwe nguhulumeni ukubhekana nobugebengu obunjalo, nge-cyborg UMotoko Kusanagi phambili.
Lolu chungechunge luya ngokuya lufaneleka njengoba ubuchwepheshe buqina futhi buhamba phambili nsuku zonke.
Kunemibuzo ephakanyiswayo mayelana nokuxhumana phakathi komzimba nomphefumulo, kanye nemibuzo yokuthi kuzuzisa kanjani ukuthuthuka kobuchwepheshe ngempela kuyinto.
Kuyafaneleka: 26 Womoya Onamandla Kunazo Zonke Kwizigaxa ZeShell Ezingaphelelwa Isikhathi
19. I-Revolutionary Girl Utena
Utena Tenjou Ufunda e-Ootori Academy, lapho elwela ukuthola umklomelo weRose Bride naye U-Anthy Himemiya.
Njengoba uchungechunge luqhubeka ukunaka kuka-Utena kushintshela ekutholeni i- izimfihlo ngemuva kwe-Ootori Academy, futhi nethemba lokuguqula umhlaba.
Kunezindikimba eziningi kakhulu ezipakishwe kulolu chungechunge. Umbono wobuntwana, ukuba mdala, ezocansi, ukuhlukunyezwa, kanye nokuzazisa konke kuyahlolwa kakhulu ku-Revolutionary Girl Utena.
Amathopi avamile ezinganekwaneni nohlobo lwentombazane yomlingo afakiwe, aguquliwe, futhi yakhiwe kabusha.
20. UPuella Magi Madoka Magica
Izinguquko zempilo kuMadoka Kaname nabangane bakhe lapho behlangana noKyuubey, isidalwa semilingo esifana nekati.
UKyubey ubanikeza isipho esizonikeza noma isiphi isifiso sabo, futhi ngokushintshana bazoba amantombazane omlingo.
Ekhuluma ngamathambo wokwakha kabusha, uMadoka Magica akakwenzi nje lokhu kuphela, kodwa futhi wenza kabusha izakhiwo lonke uhlobo lwentombazane yomlingo.
UGen Urobuchi (umbhali wamanoveli wasemuva kukaMadoka Magica) wayefuna ukuhlola izici zalolu hlobo olukhathazayo noluyinkinga.
Futhi uyaphumelela ukwenza kanjalo ngenkathi enikeza ama-twist amaningi okusonteka, nomuzwa omkhulu wokungakhululeki kumbukeli njengoba umbukiso uthola kumnyama.
21. Owodwa Outs
AmaSaitama Lycaons yiqembu elibi kunawo wonke ophikweni oluphambili lwe-baseball eJapane.
UToua Tokuchi uhlose ukukushintsha lokho nge okuhle kakhulu umdlali ozimisele ngokuwina isicoco.
Umnikazi uyangabaza ngokuletha umdlali ongenalwazi lomsebenzi, bese yena emnikeza inkontileka ekhethekile. Ngokukhipha ngakunye, uzothola ama-yen ayizigidi ezi-5.
Ekugijimeni ngakunye anikela ngakho, uzolahlekelwa ama-yen ayizigidi ezingama-50.
Ukuphuma okukodwa ibhala ngempi enamandla yengqondo eyenzeka phakathi kukaToua nalabo abhekene nabo.
22. UPing Pong ukugqwayiza
UPeco noSmile bengingabangani kusukela ebuntwaneni. Manje, bobabili bangamalungu ekilabhu yethenisi yetafula eKatase High School.
Ukuzethemba okugcwele kukaPeco, ehlose ukuba ngophambili emhlabeni. Mamatheka ngakolunye uhlangothi kuyakhombisa okuncane ukuvelela futhi kubonakala njengencwadi evaliwe, kodwa yena abanamakhono noma kunjalo.
Bobabili uPeco noSmile banezithiyo eziningi zengqondo okufanele bazinqobe, futhi izingqinamba zabo ziyabuyiseka uma uke wadlala imidlalo noma nini empilweni yakho.
Lolu chungechunge luhlola izingqikithi ze- ithalente kuqhathaniswa nokusebenza kanzima , futhi iyindaba yakudala engalibaleki.
23. Umthala WeTatami
ITatami Galaxy ilandela umfundi owenza unyaka wesithathu ongagagulwanga ngegama eKyoto University. Uyazisola ngendlela abephila ngayo ekolishi, aphinde abone impilo yakhe yasekolishi ngokusebenzisa amayunivesithi ahlukene ahambisanayo.
Njalo lapho efunda isikole esihlukile ejoyina umbuthano ohlukile wabangane, kodwa isikhathi ngasinye Akashi, isikhungo sothando lomlingiswa ophambili, sikhona naye.
Lolu chungechunge lokugoba ingqondo iphoqa ophikisayo ongenagama ukuthi abhekane namaqiniso anzima empilo yasekolishi, njengoba ephoqeleka ukuthi abone ukuthi kunjalo hhayi isipiliyoni esinombala we-rose ayehlale ephupha ngaso.
24. I-Phantom: Isicelo se-Phantom
I-Inferno yinkampani engaqondakali esebenzisa isikhali sabo somuntu esicishe singanqobeki, i- 'Phantom' ukwenza iningi lomsebenzi wabo ongcolile.
Ngelinye ilanga, lapho isivakashi ngephutha sibona ukubulawa okwenziwe nguPhantom, uyabanjwa futhi zonke izinkumbulo zakhe wesula .
Ngokusobala wahlaba umxhwele umholi we-Inferno ngokwanele ukuthi waqashwa waba yiPhantom elandelayo.
Ngaphandle kokukhumbula impilo yakhe edlule, umlingisi wethu omkhulu ulwela ukusinda ukubulala ku-Inferno, kepha uvame ukubhekana nobunzima bokungazi kwakhe, inani lenkohliso edlalwayo, nokuthi ube ngumshini wokubulala kangakanani.
Kuyafaneleka: 25 Kwezingcaphuno ezinhle kakhulu ze-Anime Mayelana Nokudangala Okufanele Ubone
25. IDanganronpa: I-Animation
IHope’s Peak Academy isikole esidumile, ngakho-ke ehlonishwayo ukuthi bangu-15 kuphela abafundi abangeniswe.
Ngeshwa labo, uma befika babhajwe nguthishanhloko.
Bavunyelwe kuphela ukuhamba uma bebulala omunye wabo ofunda nabo futhi Phuma ngayo. Kodwa-ke, uma bebanjwa, bazobulawa.
Futhi noma ngubani osele uqhubeka 'nomdlalo wokufa' kuze kube yilapho umfundi ongu-1 eshiye emile.
Njenge-anime eyimfihlakalo, kunezikhathi eziningi lapho sifakwa ezingqondweni zabalingiswa njengoba bezama ukuthola izisusa kwabangaba ababulali phakathi kwabo.
Kukhona futhi amaqhinga amaningi okusinda enza lo mbukiso ujabulise futhi uvuse imicabango.
26. Uchungechunge lwe-Aoi Bungaku
Lolu chungechunge luqukethe ukuguqulwa okuvela ezincwadini eziyisithupha zesimanje zemibhalo yaseJapan.
Ngaphandle kokuzijwayeza kokuqala okuyiziqephu ezi-4, ukujwayela ngakunye iziqephu ezi-2, konke kukhuluma izindaba ezingokoqobo, ezijulile nezikhulile.
Aoi Bungaku ikubeka ngempela engqondweni ye-protagonist yendaba ngayinye.
Ukuqonda okunemininingwane engenakuphikwa ngemizwa yabo nemicabango yabo kufanelana ngqo nohlobo lwe-psychology. Okuhle kunakho konke lokhu ikwenza ngenkathi ulandela ifayili le- okukhulu hlela isikhathi ngasinye.
27. UDeveli: uCrybaby
Osathane bangena UDeveli: Crybaby izidalwa ezinamandla amakhulu, kepha zingenzeka kuphela nge-host host.
Bahlela ukubuyisa umhlaba kubantu futhi bakwenze lokho ngokuthatha imizimba yabo.
Kodwa-ke, uma umphathi enentando enamandla ngokwanele, angathola amandla kasathane futhi agcine ubuntu bawo. U-Akira Fudou ube ngomunye wabambalwa abenza lokhu, futhi uzozama ukukusebenzisa ukuvikela abathandekayo bakhe.
Abademoni njengo-Akira kumele imelane nokunxenxa kwezilo ezingaphakathi kwazo. Bahamba umugqa omuhle phakathi kwalezo zikhalazo nobuntu babo kuthanda ivumela ukuthi zigcinwe.
Lolu chungechunge lusebenzisa ubudlova ukuhlola izingqikithi zophazamiseko, ubandlululo, nombuzo wakudala; Ngabe i-monster ingazizwa njengomuntu?
28. Re: Zero - Ukuqala Ukuphila Komunye Umhlaba
Zicabange ungena esitolo futhi uphuma kuso ukubona ukuthi usezweni elihluke ngokuphelele.
Lokho kuyiqiniso ngoSubaru Natsuki futhi kuleli qiniso, uhlaselwa ngokushesha, kodwa ngokubonga usindiswe ubuhle obunezinwele ezimhlophe.
Ngokuphindaphindiwe uyavuma ukumsiza athole lokho akufunayo. Ngeshwa labo balandelwa ngamandla amnyama futhi usuku alupheli kahle, kepha uSubaru uzokhumbula lolu suku futhi azame ukuzisindisa yena nentombazane: U-Emilia
USubaru ungumlingisi onamaphutha okumenza abhekane namaqiniso.
Ucabanga ukuthi usesimweni esingcono kunangesikhathi ayekhona 'ezweni langempela', kodwa kuvela ukuthi kubi kakhulu.
Njengoba ekhaya kungabonakali, nezimo ziya ngokuya ziba zimbi, kwaSubaru ukuphoqelelwa ukwenza okungcono kakhulu.
Okuhlobene: 5 Umehluko Ohlukile Phakathi kukaRem NoRam Ovela kuReZero
Olunye uchungechunge emthanjeni ofanayo nowe-future Diary kanye nemidlalo yendlala, I-Btooom! imayelana umdlalo okusinda.
URyota Sakamoto ubhajwe esiqhingini esilahliwe edlala uhlobo lwangempela lomdlalo wakhe awuthandayo, lapho wonke umdlali kufanele abulale abanye abadlali abayi-7 abanezinhlobo ezahlukahlukene zamabhomu.
Amabhomu ahlukene abiza amasu ahlukene, futhi umlingisi wethu omkhulu nje ube ngumdlali ophambili waseJapan emdlalweni wevidiyo online onemithetho efanayo, ngakho-ke usebenzisa lezo amathalente ukuhlala uphila kulo mdlalo.
Indaba ayidonsi izibhakela ngendlela abantu abenza ngayo endaweni yokubulala noma yokubulawa.
30. Uhambo lukaKino
UKino ungumhambi osemusha, futhi ngebhayisikili lakhe iHermes, uhlola amazwe amaningi namadolobha.
Indawo ngayinye iyahlukahluka ngamasiko nezakhamizi, kusuka kokuthakazelayo kuya kokumpunga ngokokuziphatha kuya kokubi.
I-Kino ayichithi izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 kunoma iyiphi indawo enikeziwe, ngakho-ke sithola inqwaba yemikhuba kuzo zonke iziqephu zayo eziyi-13.
UKino akanayo intshisekelo yokuthonya noma yokuguqula imihlaba emincane ayivakashelayo, njengoba bethatha isinqumo sokuba ngababukeli nje abakholelwa ukuthi “umhlaba awumuhle; ngakho-ke kunjalo. ”
Lokhu kumenza abe ngumkhumbi wemibuzo, umuntu osesikhundleni esifanayo nezithameli.
IKino’s Travels inokubonakaliswa okuningi kwefilosofi okuphekwe kuyo.
I-15 Ye-Best Anime Anime Series Okufanele Uyibuke
62 Yombukiso Omuhle Kakhulu Wezithombe Zesikhathi Sonke